Knowledge | MYANMAR UNICODE® MIGRATION
Aug 31, 2020 • suntun
မေး - မြန်မာယူနီကုဒ်ဆိုတာဘာလဲ?
မေး - ယူနီကုဒ်ဖောင့်ကို ဘာကြောင့်သုံးစွဲသင့်ပါသလဲ?
မေး - ဘယ်ဖောင့်တွေက ယူနီကုဒ်စံကို လိုက်နာသလဲ?
မေး - ၂ မျိုးမြင်ဖောင့်ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုသုံးစွဲရမလဲ?
၂ မျိုးမြင်ဖောင့်ဆိုတာ ယူနီကုဒ်စံစနစ်အတိုင်း ရေးနိုင်၊ ဖတ်နိုင်ရုံမကဘဲ ဇော်ဂျီစနစ်ဖြင့် ရေးသားထားသော စာများကိုလည်း ၈၀%ခန့် ဖတ်ရှုနားလည်နိုင်သော ဖောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေးသားတဲ့အခါမှာ တော့ ယူနီကုဒ် လက်ကွက်ဖြင့်သာ ရေးသားမှ မှန်ကန်နိုင်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်စံစနစ် ပြောင်းလဲသုံးစွဲရေးအတွက် တွန်းအားတစ်ရပ်အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မေး - ဇော်ဂျီဆက်သုံးနေရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
တိုင်းရင်းသားဘာသာတွေ ကိုသုံးစွဲလို့မရတော့ဘူး။ ဂူးဂဲမြေပုံ၊ ဂူဂဲ ဘာသာပြန်စနစ်၊ facebook စတာတွေမှာ မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာ မမြင်နိုင်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာမှာ ဘာသာဗေဒ၊ ဘာသာစကား ဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင်လုပ်ဆောင်နိုင်တာကို ရှေ့မဆက်နိုင်တော့လို့ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အဟန့်အတား ဖြစ်စေပါတယ်။
မေး - ဇော်ဂျီကို Unicode စံစနစ်ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရသလား?
မေး - ဇော်ဂျီကို Unicode အဆင့်သို့ ပြုပြင် မြှင့်တင်လို့ရသလား?
မေး - Unicode ကိုသုံးရလွယ်ကူအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလား?
မေးခွန်းမှားနေပါတယ်။ Unicode ဆိုတာဖောင့် လည်းမဟုတ်သလို လက်ကွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သုံးစွဲသူမြင်နေရတဲ့ ရုပ်ဆင်းတွေ လက်ကွက်နေရာတွေ သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ အက္ခရာတွေသိမ်းဆည်းတဲ့စနစ် ဘယ်လို ရှေ့နောက်ထား စီစဉ်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ကိုသတ်မှတ်တာပါ။
သုံးစွဲသူက ဘယ်လို ရိုက်နှိပ်ပေးရမယ် ဘယ်လိုပြန်ပြပေးရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ကန့်သတ်မထားပါဘူး။
မေး - ဒီအပြောင်းအလဲကြီး အောင်မြင်သွားဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?
Unicode ဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ နားလည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့လိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်က ရှေဆက်သွားဖို့ရာ ထိရောက်မှုရှိအောင် စီမံနိုင်မယ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်။